နိုင်ငံသားများအားလုံး လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ အစဉ်အလာ စောင့်ထိန်းလျက် ညီညွတ်စွာ နေထိုင်သွားရေးကို ရှေးရှုလျက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က ၂၆-၇-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၀/၂၀၁၃) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံ (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်ကို) ဤနေရာတွင် ရယူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ press-release-10-2013 , press-release-10-2013-english
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း၏ ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ) ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပါ အချက်အလက်များ (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) ကို ဤနေရာတွင် ရယူဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ vice-presidents-press-conference-myanmar-english
The press conference on Rakhine trip by Chairman of the Central Committee for Rakhine State Peace, Stability and Development Implementation Vice-President Dr. Sai Mauk Kham was held at the Ministry of Foreign Affairs (Yangon Branch) on 9th July 2013. Click here. vice-presidents-press-conference
Republic of the Union of Myanmar, Information Team, Press Release No 8/2013, 4th Waxing of Kason, 1375 ME ( 13th May 2013 ) >> Read More
President U Thein Sein deliveredaremark on the report of the Rakhine Investigation Commission on 6th May 2013. The full text of the remark can be downloaded here. english( pdf )
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ ၆-၅-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်း (မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)အား ဤနေရာတွင် ရယူဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ myanmar , english
The Rakhine Investigation Commission has released its report and issued the list of recommendations. Click here. recommendations-rakhine-report
The Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Foreign Affairs Press Release >> Read More
Press Release ( Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw ) ( 11st April 2013 ) >> Read More
Briefing by Union Minister for Foreign Affairs, U Wunna Maung Lwin to the diplomatic corps, On recent incidents ( Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw ) >> Read More
The Government of the Republic of the Union of Myanmar ( Ministry of Foreign Affairs ) ( Press Release on Situation in Rakhine State ) >> Read More